नेकपामा अब ‘एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी’ - News site from Nepal
काठमाडौं- नेकपा सचिवालयको शनिबारको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘नाटकीय’ रूपमा परिवर्तन भए ।
बैठक सुरु हुनुअघिसम्मको स्थितिअनुसार उनी शनिबार पनि त्यसैगरी कड्किनुपर्ने हो, जसरी बुधबार प्रस्तुत भएका थिए । तर माहोल एकाएक शान्त र शालीन बनेपछि बैठकमा उपस्थित अरू सचिवालय सदस्यहरू पनि छक्क परे ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले त पार्टी विधि र पद्धतिमा चलाउने र आपसी सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने अध्यक्षद्वयको प्रतिबद्धतालाई ‘शंकाको सुविधा’ सहित हेर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
बुधबार गर्मागर्मी वादविवाद गरेर बाहिरिएका नेकपा सचिवालय सदस्यहरूको शनिबार साँझको छलफल सौहार्दपूर्ण रूपमा कसरी अगाडि बढ्यो ? बराबरी हैसियतमा बसेर अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र दाहालले पार्टी एकताबारे उस्तै खालको अभिव्यक्ति दिन कसरी सम्भव भयो ?
जबकि बुधबारको बैठकमा दाहालको आक्रोश, शुक्रबार ओली र दाहालबीचको भेटमा भएका असमझदारी र शनिबार दिउँसोसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमले सचिवालयको बैठक बहुमत–अल्पमतकै लडाइँमा पुगेर रोकिन्छ भन्ने आकलन स्वयं नेताहरूले पनि गरेका थिए ।
हामीले अध्यक्षद्वय, वरिष्ठ नेता नेपाल र सचिवालय सदस्यहरूको ब्रिफिङ सुनेका केही नेतासँग कुराकानी गरेपछि शनिबार ओली र दाहालबीच भएका छलफल र सहमतिको फेहरिस्त निकालेका छौं ।
त्यसको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीका लागि चर्चामा आएका पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निर्णयले ‘भूमिका’ खेलेको देखिन्छ । नेकपाको शक्ति सन्तुलनमा रोमाञ्चक तरिकाले परिवर्तन हुनुको कारण गौतमकै भूमिकाबाट खोतल्न सुरु गरौं ।
उपाध्यक्ष गौतम शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । त्यही समयमा उनलाई अर्का अध्यक्ष दाहालले पनि बोलाएका थिए तर गौतमको प्राथमिकतामा बालुवाटार पर्‍यो । त्यहाँ ओली र गौतमबीच ०४८ सालयताको मित्रता सम्झिएर लामो गन्थनमन्थन चल्यो ।
छलफलको सहजीकरण महासचिव विष्णु पौडेलले गरे । उनले गौतमलाई ओलीको पक्षमा लैजान भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका थिए । स्रोतहरूका अनुसार छलफलमा ओली धेरै भावुक भएर प्रस्तुत भए । ‘तपाईंको र मेरो मित्रता पुरानै हो, तपाईंकै कारण म पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्न सकेको हुँ,’ ओलीले गौतमसँग भनें, ‘तपाईंले लगाएको गुन म बिर्सिन सक्दिनँ, म पछिको प्रधानमन्त्री तपाईं नै, यो बेला मलाई सहयोग गर्नुस् ।’
गौतमले क्याम्प फेरिसकेको थाहा पाएपछि दाहाल केही हडबडाएका भने थिए । अरू सचिवालय सदस्यहरूसँगै बैठक कक्षमा ओलीलाई पर्खिएर बसेका दाहालसँग राष्ट्रपतिलाई भेटेर शीतल निवासबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले एकछिन छुट्टै भेट्न चाहे । त्यसपछि उनीहरूबीच एक्लाएक्लै कुराकानी भएको थियो ।
सचिवालय बैठक सुरु हुनुअघि दुई अध्यक्षबीच मात्रै भएको करिब १५ मिनेटको छलफलमा भने मित्रताको हात ओलीले नै अघि बढाए । ओलीले मिलेरै जाने प्रस्ताव गरेका थिए ।
‘अहिलेलाई मेरो राजीनामाका कुरा ननिकाल्नुस्, योबीचमा तपाईंले पनि खेल्न खोज्नुभयो, मैले पनि खेल्न खोजें, मैले अलि धेरै गरें कि भन्ने महसुस भएको छ,’ ओलीले दाहाललाई भने, ‘पुरानै सहमति अनुसार जाऔं, तपाईं पार्टी चलाउनुस्, पार्टीको निर्देशनमा म सरकार चलाउँछु ।’
स्रोतहरूको भनाइअनुसार ओलीको यो प्रस्ताव स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलसहितका ओली पक्षीय केही नेताहरूले तयार पारेका थिए । यो कुरा किन पनि पुष्टि हुन्छ भने दाहालसँग मिलेरै जाने गरी बालुवाटारले दिउँसैदेखि तयारी गरेको थियो ।
‘हाम्रो तयारी दुई किसिमको थियो,’ ओली समूहका एक स्थायी कमिटी सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘पहिलो त अहिलेसम्मका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने, नियुक्तिलगायतका कुरामा सहमति गर्ने र प्रचण्डजीलाई कार्यकारी अध्यक्षको सम्पूर्ण हैसियत प्रदान गर्ने,’ ती नेताले भने, ‘यो अस्त्रले काम नगरे बहुमत–अल्पमतमै जाने स्थिति आउँदा पनि हामीसँग पाँच जना सचिवालय सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।’
उनका अनुसार सचिवालयमा बबन्डर भएर स्थायी कमिटीमा विषय लैजाने निधो भयो भने त्यहाँ आफूहरू झन् कमजोर हुने निचोडसहित ओली पक्षीय नेताहरू सकेसम्म झुकेरै जानुपर्छ भन्ने लाइनमा थिए । त्यसैले ओली शीलत निवास जानुअघि नै दुवै अध्यक्षको बराबरी हैसियतसहितको टेबलकुर्सी तयार पारिएको थियो ।
कुराकानीमा ओलीले आफूले अहिलेसम्मका सबै गल्तीमा आत्मालोचना गर्ने बताउँदै त्यसका लागि दाहाल पनि तयार हुनुपर्ने धारणा राखे । यही सहमतिसहित बैठकस्थलमा छिरेका दाहाल र ओलीले आ–आफ्नो पोजिसन पूरापूर परिवर्तन गरे ।
ओलीले पार्टी एकीकरणको दुई वर्षपछि आफूबाट गल्ती भएको भनेर पहिलो पटक शनिबार नै स्वीकार गरेका हुन् । नत्र उठेका प्रश्नहरूको जवाफ बैठक र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमार्फत दिँदा उनले कहिल्यै पनि आफूबाट गल्ती भयो भन्ने गरेका थिएनन् ।
शनिबारको सचिवालय बैठक सौहार्दपूर्ण रूपमा सकिएपछि आन्तरिक कारणले चुलिएको ओली सरकारको सत्तासंकट टरेको छ । योसँगै सचिवालयले २५ गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गर्न पार्टीको संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिवेदन बनाउन अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
दाहालले पार्टी र सरकार सञ्चालनको ‘गाइडलाइन’ तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि पाएका छन् ।
जसअनुसार उनले सरकार र पार्टीको कार्यशैली कस्तो हुने, कुन नेताको भूमिका के हुने, प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली र कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा दाहालको भूमिका के हुने भनेर परिभाषित जिम्मेवारीको व्याख्या उक्त गाइडलाइनमा गर्ने सचिवालय सदस्य खनालले बताए ।
‘अब पार्टी र सरकार कसरी चल्ने भनेर प्रचण्डजीले गाइडलाइन ल्याउनुहुन्छ, त्यसलाई हामीले पारित गरेर स्थायी कमिटी बैठकमा लैजान्छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीबारे परिभाषित व्याख्या गाइड लाइनमै आउँछ ।’
शनिबार राति अबेर सकिएको सचिवालय बैठकमा ओली र दाहालबीच केही न केही सहमति भएको छ भन्ने आशय झल्काउने गरी निर्णय भएपछि ओली कार्यशैलीको विपक्षमा उभिएका नेताहरू झस्किए ।
हुन त अप्रत्याशित रूपमा सहमतिको कुरा आएपछि सचिवालय बैठकमै वरिष्ठ नेता नेपाल पनि सशंकित भएका थिए । आइतबार दिउँसो अबेरतिर पनि नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरू यो बैठकको सन्देश के हो भन्नेमै अन्योलग्रस्त थिए ।
दाहालले यसअघि पनि बारम्बार नेपालसँग गठबन्धन गरेर अन्तिममा ओलीसँग सहमति गरेपछि थुप्रैपटक एक्लिएका नेपालको नियति यस पटक पनि त्यही भएको त होइन भन्ने आशंका उनीहरूमा थियो । त्यसैले आपसमा भेटेरै यो विषयमा स्पष्ट हुन नेपाल र दाहाल दुवैलाई आ–आफू पक्षका नेताहरूको दबाब थियो ।
आइतबार मध्याह्नतिर दाहाल र नेपालले ललितपुरस्थित नेकपाका एक नेताको घरमा भेटेर झण्डै दुई घण्टा भलाकुसारी गरे । भेटमा नेपालले आफूले जहिले पनि पार्टी एकता र विधि पद्धतिकै कुरा गरेको भन्दै त्यसबाट बाहिर गएर पार्टी नचलाउन अध्यक्ष दाहालसँग आग्रह गरेका थिए ।
‘तपाईंहरू त आ–आफ्नो पोजिसन के हुन्छ भनेर लाग्नुभएको होला,’ दाहालसँग नेपालले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘म अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम आचार्य, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डेहरू जस्ता क्षमता हुँदाहुँदै पनि अवसर नपाएका साथीहरूका लागि लडिरहेको छु ।’
नेपालको भनाइ सुनेपछि दाहालले शनिबार ओलीसँग केही मुख्यमन्त्री र केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने, संवैधानिक र राजदूत नियुक्तिहरू आपसी सहमतिमा गर्ने समझदारी बनेको जानकारी गराएका थिए ।
लगत्तै नेपालले आफूपक्षीय नेताहरूलाई दाहालले अहिलेसम्म ‘विश्वासघात’ नगरेको सन्देश दिएका थिए । ‘तर प्रचण्डजी निजी स्वार्थका लागि रूप बदलिरहने नेता हो,’ नेपाल निकट एक नेताले भने, ‘स्थायी कमिटी बैठकसम्म कसरी आउनु हुन्छ, हेरौं न ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट